Akụkọ - Mpekere Ngwongwo dị mkpa Ezinaụlọ ọ bụla
N'ọtụtụ ụzọ, ime ụlọ ihi ụra bụ ime ụlọ kachasị mkpa n'ụlọ ọ bụla. Ọ na - enyere gị aka izu ike ma nwee ume mgbe ogologo ụbọchị gachara, imebe ime ụlọ ime ụlọ gị kwesịrị ịmebe gburugburu ebe obibi kwesịrị ekwesị nke na - akwalite ụra. Itinye ego na akụrụngwa kwesịrị ekwesị nwere ike inyere gị aka ime nke a ma kwalite ogo na ụra gị. Ka anyị leba anya n’ihe ụfọdụ dị mkpa nke ngwa ụlọ akwa akwa kwesịrị inwe.
1. Ala oche
You bụ ụdị onye na-enwe mmasị ịgụ ma ọ bụ ịppingụ iko nke chocolate dị ọkụ tupu ị lakpuo ụra? E nwere ọtụtụ ihe mere ịzụta ngwá ụlọ, ma na-enwe a comfy oche gị ime ga-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè n'ihi na ị. Ọ ga - enyere gị aka izu ike ka ị na - akwado ihi ụra. Nwere ike ịnweta oche oche, oche, ma ọ bụ ọbụna oche na-ama jijiji. Ọ ga-adabere na mkpa gị na mmasị gị. E wezụga ime ka nkasi obi dịkwuo elu, ịgbakwunye arịa ụlọ kwesịrị ekwesị nwere ike ịchọ ime ụlọ gị mma.
2. Ezigbo akwa
Ihe ndina gị bụ ihe kachasị mkpa maka ime ụlọ gị. Akwa nkpuru obi na okpokoro mara mma na-aga ogologo oge n'ịkwalite ụra na-edozi ahụ ma zuru ike. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ahụmịhe ụra ka mma, ị kwesịrị ịtụle itinye ego na akwa, sara mbara, na akwa dị mma.
3. Isiokwu Ndina
Site na iji arịa ụlọ dị mma, ị nwere ike ịgbanwe ime ụlọ dull ka ọ bụrụ ezumike eze. Okpokoro akwa akwa bụ ihe dị mkpa n'ime ime ụlọ ọ bụla. Ọ na-agbakwunye ihe ndina gị ma na-enyere gị aka ịchebe oge dị mkpa maka abalị ka ị ghara iru gị ka ị ghara ịla n’elu akwa ma ọ bụ ịkwaga mgbe ị na-ehi ụra. N'ebe a, ịnwere ike idunye otu iko mmiri, iko iko, akwụkwọ, ma ọ bụ ọgwụ ka ha wee dị mfe iru mgbe ị na-ehi ụra.
4. Uwe mkpuchi
Uwe mkpuchi akwa bụ nnukwu arịa dị na ime ụlọ ọ bụla. Ọ na - ejide uwe gị niile dị mkpa ma na - eme ka ejiji gị ahazi nke ọma. Ọ na-ebelatakwa ngwongwo dị n’ime ime ụlọ site na ịdọkọta ihe niile ọnụ. You nwere ike ma họrọ a standalone ma ọ bụ ihe inbuilt wodrobu dabere na mmasị gị.
5. Uwe eji ejiji
Ime ụlọ ọ bụla rọrọ nrọ kwesịrị ịgụnye akwa ejiji. Ọ na-agbakwụnye mmetụ nke ịma mma ma nyere gị aka idobe ihe gị ahazi. Onye na-eji ejiji arụ ọrụ dị iche iche, dịka ichekwa ngwa nke gị, uwe, obere ego, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị mma. Ewezuga nchekwa, onye na-eji ejiji achọta ihe ndozi ọzọ n'ime ụlọ gị. Nke kachasị mkpa, itinye enyo na-enyere gị aka idozi ejiji onwe gị na ọdịdị gị kwa ụbọchị.